WAR CUSUB: AMISOM oo Diiday inuu Habeenkii Shaqeeyo Garoon Aadan Cadde, Ogow Sababta | Garqaad News Agency
Dowlada Soomaaliya ayaa ku talaabsaneysa Talaabooyin dhowr ah oo hormar badan ku soo kordhianaya Soomaaliya, waxaana hada shacabka Soomaaliyeed u muuqata inuu dalka isbedel ka sameynayo dhinacyo badan.
Garoonka Diyaaradaha Aadan cadde inuu habeenkii shaqeeyo waa mid ka mida waxyaabaha shacabka ay sida weyn ugu farxeen laakiin AMISOM ayaa is hor-taagay in habeenkii uu shaqeeyo, kaddib markii maalmo ka hor ay dowladdu ku dhawaaqday in garoonka uu wixii hada ka dmabeeya uu shaqeynayo habeenkii.
Muran ayaa dhex maray Saraakiisha AMISOM ee gacanta ku haya ammaanka garoonka iyo Maareeyaha garoonka Aadan Cadde, kaddib markii Khamiistii ay Ciidamada AMISOM albaabka laga galo garoonka sidii caadada aheyd dhagxaan ku xiray, markii la gaaray 05:00 galabnimo oo ah xilliga laga rawaxo garoonka.
Saraakiisha AMISOM ayaa is hor-taagay amar uu soo gudbiyay Maareeyaha Garoonka, kaasoo ahaa inay furaan qeybta bixitaanka garoonka, si ay u maraan gawaarida iyo dadka garoonka ka soo degay gelinkii dambe.
Intaasi kaddib Maamulka Garoonka ayaa qaatay go’aan ah in cagaf cagaf ay ku qaadaan dhagxaantii ay AMISOM ku xirtay albaabka, iyadoo markii dambena ay AMISOM qaaday tallaabo kale oo gaari Beebe ah ku gooyeen albaabka.
Shir ay isugu yimaadeen Saraakiisha AMISOM iyo Maamulka Garoonka ayaa fashil ku dhamaaday, kaddib markii ay AMISOM diiday inay damaanad qaado amniga Garoonka xilliyada habeenkii.
Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka Maxamed C/llaahi Salaad ayaa Axadii la soo dhaafay ku dhawaaqay in garoonka diyaaradaha Aadan cadde uu wixii hada ka dambeeya uu shaqeynayo habeenkii, isla markaana la kordhiyay saacadaha shaqo ee garoonka, lana gaarsiiyay illaa 10:00 habeenimo.
Nalalka ifiya dhabaha ay ku ordaan diyaaradaha ayaa dhowaan laga hirgeliyay garoonka, taasoo dowladdu sheegtay inuu sahli doono in garoonka uu shaqeeyo habeenkii.
Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ayaa dhowr caqabad dartood u shaqeyn karin xilliyada habeenkii, sida in habeenkii ay garoonka ka degaan diyaarado milateri, isla markaana aan habeenki la ogoleyn in laga soo ag dhowaado garoonka iyo nawaaxigiisa, waxaana dhacdamarka shaqaalaha Soomaalida marka ay ka rawaxaan garoonka in dhagxaan iyo baabuur lagu gooyo albaabka laga galo garoonka.